» नेपालले इन्टरनेशनल कराँतेमा सहभागिता जनाउने
नेपालले इन्टरनेशनल कराँतेमा सहभागिता जनाउने
२६ जना खेलाडी सहित ३६ जनाको टोली भारत जाने
२९ चैत्र, बुटवल । भारतमा बैशाष ९ र १० गते हुने इन्टरनेशनल कराँते एण्ड किक बक्सीङ्ग च्याम्पीयनसिपमा नेपालले सहभागिता जनाउने भएको छ ।
पटनाको पाटलीपुत्र स्पोटर्स कम्पेलेक्समा हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित ८ देशले सहभागिता जनाउने छन् । प्रतियोगितामा जापान गोजुरीयो कराँते डो मिसन संघको राष्ट्रिय टोलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न लागेको हो ।
जापान गोजु रियो कराते डो मिसन संघले रुपन्देहीको भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक के. बि राना (काजी) को नेतृत्वमा २६ जना खेलाडी सहित ३६ जनाको टोली भारत जाने जानकारी गराएको छ । प्रतियोगितामा नेपालले बिभिन्न उमेर समुह र तौल समुहमा सहभागिता जनाउने प्रमुख प्रशिक्षक के. बि रानाले जानकारी दिए । उनले खेलाडीहरुले कडा मिहेनत गरीरहेकाले प्रतियोगीताका सबै स्पर्धामा नेपालले जित हासिल गर्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।
खेलाडीसंगै नेपालको तर्फबाट कराँते महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष भरत बहादुर केसी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अधिकृत ओमनाथ न्यौपाने, जापान गोजु रियो कराते डो मिसन संघका केन्द्रिय सचिव गिरी पुन, रुपन्देही अध्यक्ष उमेश थापा मगर र चिकित्सक डा. विकास आले सहित १० जना अफिसियल , खेलाडी र पत्रकार महासंघ रुपन्देहीकी उपाध्यक्ष निरु गौतम, लुम्बिनी खबर दैनिकका सम्पादक नरेश केसी सहितको टोली भारत जाने छ । टोलीमा रुपन्देही, कास्की, बाँके, सुर्खेत र वाग्लुङका खेलाडीहरु सहभागि छन् ।
कराँते महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष भरत बहादुर केसीले नेपालका खेलाडीलाइ विश्वसामु चिनाउन प्रतियोगीतामा सहभागिता जनाएको बताए । उनले भने र्– नेपालका खेलाडी पनि बलीया छन् भन्ने देखाउन तयारीका साथ जादै छौ, नेपालको शिर उँचो गराएर फर्कने छौ । ’
बिगतका प्रतियोगिताहरुमा पनि भारतमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका अनुभवी खेलाडी टिममा रहेकाले प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा आउने संघका रुपन्देही अध्यक्ष उमेश थापा मगरले बताए । यसअघि सन् २०१७ मा भारतको पुनामा भएको साउथ एसीयन च्याम्पियनसिपमा नेपालले १४ वटा गोल्ड मेडल जितेको थियो । यसपटक पनि सबै स्पर्धामा गोल्ड मेडल हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ कडा परिश्रम गरेको रुपन्देहीका खेलाडी सन्तु दंगोरीया थारुले बताए ।